faminaniana Archives - Sword Cross sy Crown
Ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an’Andriamanitra sy i Jesosy Zanany izay nirahiny!
Enga anie 7, 2018 sklindsey
Ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an’Andriamanitra sy i Jesosy Zanany izay nirahiny! Rehefa avy nanome toky ny mpianany Izy fa hanana fiadanana ao Aminy, na dia eto amin'izao tontolo izao aza dia hahita fahoriana izy ireo dia nampahatsiahy azy ireo Izy [...]
Laviro ny maha-zava-poana ny fivavahana, ary feiso ny fiainana!
Septambra 26, 2016 sklindsey
Lavao ny zava-poana amin'ny fivavahana, ary ekeo ny Fiainana! Jesosy dia nilaza tamin'ny olona hoe: "'Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava, mba ho tonga zanaky ny mazava.'" (Jaona 12: 36a). [...]
Ny fahatezeran'ny Zanak'ondry
Septambra 23, 2016 sklindsey
Ny hatezaky ny Zanak'ondry Maro tamin'ny Jiosy no tonga tany Betania, tsy hijery an'i Jesosy ihany, fa mba hahita an'i Lazarosy ihany koa. Te hahita ilay lehilahy natsangan'i Jesosy izy ireo. [...]